CTQM | Trade Promotion
၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် စတင် တည်ထောင်
FAO မှ မူလစီမံကိန်းအဆိုပြုချက်
၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် ADB ထောက်ပံ့ငွေ
အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၅၀ဝ၀ဝ) ရရှိခဲ့ပါသည်။
၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် JICA အကူအညီဖြင့်
၁၉၈၅ ခုနှစ် မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ
Commodity Testing & Quality Management Center(Hlegu)
မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံ(၁၀)နိုင်ငံတွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး ပြောင်းလဲ နေသောနိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များနှင့် အညီ ဈေးကွက် စီးပွားရေးကို အရှိန်မြှင့်ဖော်ဆောင် လျက်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအပေါ် အခြေခံသော်လည်း အခြား စီးပွားရေးကဏ္ဍအသီးသီးတွင်လည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွင်ရှိ stake holder များအား လုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးသည် စီးပွားရေးကဏ္ဍ အသီးသီး၏ ပို့ကုန်တိုးမြှင့်ရေးအပေါ်တွင် မှီတည်လျှက်ရှိရာ အဆိုပါပို့ကုန်များ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်သို့အောင် အောင်မြင်မြင်ထိုး ဖောက်တင်ပို့နိုင်ရေးအတွက် အရေအတွက်ပြည့်မီ ရုံသာမက အရည်အသွေးပိုင်းမှာ ဒေသဆိုင်ရာအဆင့် ကမ္ဘာ့အဆင့်ပြည့်မီနိုင်အောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးသည် ၁၉၉၅ ခုနှစ် WTO ၏ ဥရုဂွေးအစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များ အရပိုမိုလွတ်လပ်သောအသွင်ဆောင်လာသော်လည်း အစားအစာဘေး အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ စားသုံးသူအကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာလူ၊တိရိစ္ဆာန်၊အပင်များကျန်းမာရေး ၊ အန္တရယ်ကင်းရှင်း ရေးဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေး အတားအဆီးများ ကတဖန်နေရာယူလာပါသည်။ အဆိုပါအတားအဆီးများမှာ ရှုတ်ထွေးပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့စီးပွားရေးထွန်းသစ်စနိုင်ငံများအတွက် ကြီးမားသောကုန်သွယ်ရေး အတား အဆီးဖြစ်နေရာ အဆိုပါအတားအဆီးများ ကိုကျော်လွန်နိုင်ရေးအတွက် အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများပူးပေါင်း၍ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် အရည်အသွေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများချမှတ်ရန် အရေးတကြီး လိုအပ်လျှက်ရှိပါသည်။
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ပို့ကုန်မြှင့်တင်ရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ ကုန်ပစ္စည်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးရေးနှင့် အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှု ဌာနစုသည် ပို့ကုန်သွင်းကုန်သာမက ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်လိုအပ်သော အရည်အသွေးဆိုင်ရာ မူဝါဒ၊ နည်းပညာ၊တီထွင် စမ်းသပ်မှု သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ဖြူးရေးတို့အတွက်နိုင်ငံ၏ ဗဟိုချက်မဌာနအနေနှင့်ဆောင်ရွက် သွားနိုင်ရေး အတွက် အောက်ပါလုပ်ငန်းရပ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်-
၁။ နိုင်ငံတော်၏ဈေးကွက်စီးပွားရေးဖော်ဆောင်မှုနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကဏ္ဍအလိုက် ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၏ အရည်အသွေးတိုးတက်လာစေရန်အတွက် မဟာဗျူဟာနည်းဗျူဟာများချမှတ်ဆောင်ရွက်ရန်
၂။ အမျိုးသားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အရည်အသွေး အဆောက်အအုံ တည်ဆာက်ရာတွင် အခြားသော အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများ၊ ပုဂ္ဂလိက အသင်းအဖွဲ့များနှင့်အတူ လိုအပ်သော ကဏ္ဍမှ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်
၃။ နိုင်ငံတော်၏ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် အရည်အသွေးစစ် ဆေးခြင်း၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များဖြည့် ဆည်းခြင်း၊ အမျိုးသားအကျိုး စီးပွားထိခိုက်စေနိုင်မည့်အန္တရာယ်များကျရောက်မှုမှကာကွယ်ခြင်း၊ ကာကွယ်ရန် နည်းလမ်းများ ရှာဖွေ ခြင်း
၄။ ပြည်တွင်းအသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (SMEs)များ ထုတ်လုပ်သော ကုန်ပစ္စည်းများသည်ပြည်တွင်း စားသုံးသူပြည်သူလူထု အတွက်အရည်အသွေးမြင့်မားရုံ သာမက ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှုစွမ်းရည် (Market competitiseness) မြင့်မားကာ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်သို့ ထိုးထောက်ရရှိနိုင်ရေးအတွက်အရည်အသွေးပိုင်းလိုအပ်ချက်များ တည်ထောင်ရာတွင် လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ရန်
၅။ အမျိုးသားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အရည်အသွေး ထိခိုက်မှုနည်း နိုင်သမျှ နည်းစေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ပါဝင်သူအားလုံး (Quality Culture) များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန်
၆။ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအရည်အသွေးဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှု (Quality Culture) တစ်ရပ်ထွန်းကာလာစေရေးအတွက်အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများ (Awareness Capa) ဆောင်ရွက်သွားရန်
ကုန်ပစ္စည်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးရေးနှင့်အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနစုသည် အထက်ဖော်ပြပါမူဝါဒများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အောင်မြင်မှုရရှိစေရန် အတွက်အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေးစနစ် ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှုများကို လေ့လာသွားမည်။
၂။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးစနစ်တွင် (WTO) ဥရုဂွေးအစည်းအဝေး(1995) ရလာဒ်များ အရလျော့နည်းသွားသောအခွန်စည်းကြပ်မှုများ (Tariff) များနေရာတွင် အစားထိုး ဝင်ရောက်လာသော နည်းပညာဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေးအတားအဆီးများ (TBT-Technical Berriers T.Trade) များသုတေသနပြုလေ့လာပြီး လေ့လာ တွေ့ရှိချက် များကို ဖော်ထုတ်သွားမည်။
၃။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းအဖွဲ့ကြီး(ISO)၏ စံချိန်စံညွှန်းများသာမကနိုင်ငံ အသီးသီး၏ ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများကိုလေ့လာ စုဆောင်းသွားမည် ဖြစ်သည်။
၄။ အရည်အသွေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍နိုင်ငံတကာ မူဝါဒများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ နည်းဥပဒေများကိုလေ့လာ သုံးသပ်၍ နိုင်ငံနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမည့် မည်သည့်နည်းလမ်းမဆို အသုံးချ ဆောင်ရွက်မည်။
၅။ မြန်မာ့စံချိန်စံညွှန်းတည်ထောင်နိုင်ရေးအတွက် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနက ဦးစီး ဦးဆောင်ပြုလုပ်ဆောင်နေသော လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝင်၍ မြန်မာ့ ဆန်စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးအတွက် ပါဝင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
၆။ လယ်ယာထွက်ကုန်အခြေခံကုန်ပစ္စည်းများပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချရာတွင် ဝယ်ယူသည့် နိုင်ငံများ၏ လိုအပ်သည့်အရည်အသွေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကိုပြည်တွင်း ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များကဖြည့်ဆည်းရာတွင်တွေ့ကြုံရသည့် အခက်အခဲများ၊ လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်၍ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းကာဆောင်ရွက်သွားမည်။
၇။ လယ်ယာထွက်ကုန်သာမကအခြားပို့ကုန်အမယ်အလိုက်အရည်အသွေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက် များကိုလေ့လာသုတေသနပြု ၍တွေ့ရှိချက်များကို သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ညှိနှိုင်းကာ လိုအပ်ချက်အလိုက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
၈။ ပို့ကုန်သာမကနိုင်ငံအတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာသော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ၏ အရည်အသွေးပိုင်းကိုဆန်းစစ်ကာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စားသုံးသူများအတွက်ဘေးအန္တရာယ်ရှိမရှိသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုရှိမရှိ စသည့်တို့ကို သုံးသပ်၍ အဆင့်ဆင့် တင်ပြဆောင်ရွက်သွားမည်။
၉။ လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ ၊ ဥယျာဉ်ခြံမြေထွက်ပစ္စည်းများ၏ ရိတ်သိမ်းခူးဆွတ်သည်မှ စားပွဲပေါ်ရောက်သည် အထိအရည်အသွေး မယုတ်လျော့ ကျအောင် လိုအပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် လိုအပ်သည့်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်။
၁၀။ ပြည်တွင်းတွင်လယ်ယာထွက်ကုန်များကြိတ်ခွဲထုတ်လုပ်လျှက်ရှိသောဆန်စက်၊ ဆီစက်၊ ပဲခွဲစက်များ၊ အစားအစာထုတ်လုပ်သော စက်ရုံများ၊ တိရိစ္ဆာန်အစာထုတ်သော စက်ရုံများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အသွေးကျင့်စဉ်များ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး စည်းရုံးပညာပေးဆောင်ရွက်သွားမည်။
၁၁။ ပြည်တွင်းရှိ သွင်းကုန်၊ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်နိုင်ငံတကာနှင့် ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စ များဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သည့်သတင်းအချက် အလက်များ၊ ပို့ကုန်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ၊ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ အရည် အသွေးစီမံခန့်ခွဲသည့် သတင်းအချက်များ၊ TBTခေါ် နည်းပညာဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေး အတားအဆီးများစသည်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီသိရှိနိုင်ရေးဆောင် ရွက်သွားမည်။
၁၂။ လက်ရှိအခြေခံပို့ကုန်များအပြင်တန်ဘိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်များ (Value Added) များ ထုတ် လုပ်တင်ပို့ ရောင်းချနိုင်ရေးအတွက် တီထွင်စမ်းသပ်မှုများ သုတေသနပြုဆောင်ရွက်သွားမည်။
၁၃။ မြန်မာနိုင်ငံ၏အရည်အသွေးအဆောက်အအုံ (National Quality Infrastructure) တည်ထောင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်။
၁၄။ အမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ (National Export Strategy) ချမှတ်ဆောင်ရွက် နိုင် ရေးအတွက် လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သော အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍအနေနှင့် စဉ်ဆက် မပြတ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမည်။
၁၅။ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏နည်းပညာနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန တစ်ခု ဖြစ်သည်နှင့်အညီ အရည်အသွေးနှင့် ဆက်စပ်သည့်မူဝါဒ၊ နည်းနာ၊ နည်းပညာများ သုတေသနပြုဆောင်ရွက်၍ ဖြန့်ဖြူးသွားမည်။
၁၆။ အစားအစာများထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချရာတွင် ဖြစ်စေ၊ ပြည်ပမှ မှာယူတင်သွင်း ရာတွင်ဖြစ်စေတွေ့ကြုံရသော ကျန်းမာရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေး ဆက်စပ်နေသည့် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ၊ အရည်အသွေးပိုင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ၊ စံချိန်စံညွှန်း ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို လေ့လာ ဆန်းစစ်သုတေသနပြုဆောင်ရွက်သွားမည်။
၁၇။ အရည်အသွေးဆိုင်ရာပညာပေးသင်တန်းများ၊အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊အစည်းအဝေးများ ကျင်းပဆောင်ရွက်သွားမည်။
၁၈။ အရည်အသွေးဆိုင်ရာပညာပေးစာရွက်စာတမ်းများ၊စာအုပ်စာစဉ်များပြုစုထုတ်ပြန် သွား မည်။
၂၀။ အရည်အသွေးအဆောက်အအုံကဏ္ဍတစ်ရပ်အနေနှင့် ပါဝင်သော(Conformity Assessment) (စစ်ဆေး၊စမ်းသပ်၊လက်မှတ်ပေး) စသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကြီး ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအသီးသီးနှင့် ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်။
(က) ပိုးသတ်ဆေးကြွင်းဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း (RAC)
(၁) Organo Chlorine အုပ်စု
(၂) Organo Phosphate အုပ်စု
(က) AFLATOXIN B. G. Y.F Test(Qualitative Test)
(ခ ) Romer with TLC (Quantitative Test)
(ဂ)Kamimura Florisil Method with TLC (Quantitative Test)
(ထ) Seed Health Testing /Germination Test
(၁) အဆစ်ကျိုးစပါးပါဝင်မှု (Crack grain content)
(၂) ဆန်နီပါဝင်မှု (Red kernels content)
(၁) စုစုပေါင်းဆန်ပြန်လည်ရရှိမှု (Total Rice Recovery)
(၂) ဆန်သားပြန်လည်ရရှိမှု (Head Rice Recovery)
(၁) ဆန်ပျက်ပါဝင်မှု (Damage Kernels)
(၂) ဆန်ဝါပါဝင်မှု (Yellow Kernels)
(၃) မြေဖြူရောင်ဆန်ပါဝင်မှု (Chalky Kernels)
(၄) ဆန်အရွယ်အစားတိုင်းတာခြင်း (Size & Shape)
(ဃ) အဖျင်း၊အမှော်၊ ဖုံ၊ သဲ၊ဂဲ ပါဝင်မှုစမ်းသပ်ခြင်း
(က) အစိုဓါတ်ပါဝင်မှု (Moisture Content )
(ခ) ပြာဓါတ်ပါဝင်မှု (Ash Content)
(ဂ) ပရိုတိန်းဓါတ်ပါဝင်မှု (Protein Content)
(ဃ) ကစီဓါတ်ပါဝင်မှု (Starch Content )
(င) ကော်ဓါတ်ချေဖျက်စေနိုင်သည့်အပူချိန် (Gelatinization Temperature)
(စ) ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆိုင်ရာနိုက် (HCN)
(ဆ) သဲနှင့်ဆီလီကာဓါတ် (Sand and Silica)
(ဇ) ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုဒ် (Nacl)
(ဈ) ကစီဓါတ်စေးကပ်ညီညွတ်မှု (Gel-Consistency)
(ည) အနံ့ (Aroma)
(ဋ) အာဟာရဓါတ်တန်ဖိုး (Food Value)
(ဌ) Oil & Albuminoids
(က) ဆီ၏အရည်အသွေး (Oil Property Test)
(ခ) ဆီ၏အရောင် (Oil Colour Test)
(ဂ) သိပ်သည်းဆ (Specific Gravity Test)
(ဃ) အလင်းယိုင်ညွှန်ကိန်း (Refractive -Index)
(င) ဆီခဲအမှတ် (Cloud point)
(စ) အစိုဓါတ် (Moisture Test)
(ဆ) ဆီပါဝင်မှု (Total Oil Content -TOC)
(Free Fatty Acid- FFA/AV)
(ဈ) ဆပ်ပြာဖြစ်ကိန်း ( Saponification Value)
(ည) အိုင်အိုဒင်းတန်ဖိုး (Iodine Value)
(ဋ) ပါရောက်ဆိုဒ်တန်ဖိုး (Peroxide Value)
(ဌ) ဆီပျက်/မပျက် (Rancidity)
(က) ပိုးအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း၊ အမျိုးအမည်ဖြော်ခင်း၊ကြာရှည်ခံရန်
၁။ ဆီနှင့်ဆီထွက်သီးနှံဓါတ်ခွဲခန်း(Oil and Fats Laboratory)
စားသုံးဆီအမျိုးမျိုးတို့၏အရည်အသွေးများ၊ဆီထွက်သီးနှံအမျိုးမျိုးနှင့်ဆီကြိတ်ဖတ်များ၏အစိုဓါတ်၊ဆီပါဝင်နှုန်း၊အဆီအက်ဆစ်လွတ်ပါဝင်နှုန်းများကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်မီ နည်းစနစ်များဖြင့် FAO Codex Alimentaris သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိ/ မရှိ စစ်ဆေး ၍ စစ်ဆေးတွေ့ ရှိချက် လက်မှတ် (Certificate) များထုတ်ပေးခြင်း။
၂။ ပိုးမွှားဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခန်း (Pest Laboratory)
သင့်သိုလှောင်ရုံသီးနှံများတွင် ပိုးကျရောက်မှုရှိနေပါသလား၊ မည်သည့်ပိုးများကျနေပါ သနည်း? မည်သို့ကာကွယ်နှိမ်နင်းသင့်ပါသနည်း?၊ မည်သည့်ပိုးသတ်ဆေးများသုံးသင့်ပါသနည်း? မည်သည့်နှုန်းထားများ သုံးမည်နည်း။ ပိုးထပ်မကျအောင် မည်သို့ကာကွယ်ထားမည်နည်း။ ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များက နိုင်ငံတကာစံချိန်မီ နည်းစနစ်များ အသုံးပြု၍ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ပြီး၊စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်လက်မှတ်(Certificate)များထုတ် ပေးခြင်း။
၃။ သီးနှံဓါတုအရည်အသွေးဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခန်း (Gain Chemical Laboratory)
ပို့ကုန်သီးနှံများ၏အစိုဓါတ်၊ပြာဓါတ်၊အမျှင်ဓါတ်၊ ကစီဓါတ်၊ အသားဓါတ်၊ ထုံးဓါတ်၊ ဆားဓါတ်၊ သဲနှင့်ဆီလီကာဓါတ်စသည့် ဓါတုအရည်အသွေးနှင့် အာဟာရဓါတ်ပါဝင်မှုများ၊ ဟိုက်ဒြိုဂျင် ဆိုင်ယနိုက်ဓါတ်(HCN)ပါဝင်မှုနှင့် စက်ကြိတ်မှုအဆင့်စစ်ဆေးခြင်းများကို နိုင်ငံတကာသုံး ခေတ်မီနည်းပညာဖြစ်သည့် I.C.C ( International for Cereal Chemistry),AOAC(Association of Official Analytical Chemists), IRR2 (International Rice Research Institute Method) များနှင့် ခေတ်မီစက်များ အသုံးပြုပြီး၊ တိကျမှန်ကန်သော စမ်းသပ်စစ်ဆေးချက်လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးခြင်း။
၄။ ပိုးသတ်ဆေးကြွင်းဓါတ်ခွဲခန်း(Pesticide Residues Laboratory)
ပိုးသတ်ဆေးကြွင်းဓါတ်ခွဲခန်း တွင်သတ်မှတ်ထားသော အမြင့်ဆုံးဆေးကြွင်းပါဝင်ခွင့် (MRL) ကျော်လွန်ခြင်းရှိ/မရှိ။ ပဲမျိုးစုံ၊ ဆန်စပါးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံများတွင် ကြွင်းကျန်ပါရှိနေသည့် ပိုးသတ် ဆေးဓါတ်ကြွင်းများကို FAO နှင့် Codex Alimentarious ၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များမှ စမ်းသပ်စစ်ဆေး၍ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် (Certificate)များထုတ်ပေးခြင်း။
၅။ သီးနှံရူပဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခန်း(Grain Physical Laboratory)
သန့်စင်မှု၊အစိုဓါတ်၊ အပုံလိုက်သိပ်သည်းခြင်း၊ အဆစ်ကျိုးစပါးနှင့် အခြားသီးနှံပါဝင်မှု စသည့် စပါး၏ရူပအရည်အသွေးများစမ်းသပ်ခြင်း၊ ဆန်နီပါဝင်မှု၊ ဆန်သားမာကြောမှု၊ ဆန်ဝါပါဝင်မှုစသည့် ဆန်၏အရည်အသွေးစမ်းသပ်ခြင်း စပါး၏ကြိတ်ခွဲမှုအရည်အသွေးစမ်းသပ်ခြင်း။
၆။ အာဖလာတော့ဆင်ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခန်း (Aflatoxin Laboratory)
သင့်ပို့ကုန်ကောက်ပဲသီးနှံများ၊ ဆီထွက်သီးနှံများ၊ ဆီကြိတ်ဖတ်များ၊ တိရစ္ဆာန်အစားအစာများ တွင်Aflatoxinမှိုဆိပ်ပါဝင်မှုရှိ/မရှိ။ အများဆုံးပါဝင်ခွင့်ပြုသတ်မှတ်ချက် (MRL)ကျော်လွန်မှု ရှိ/မရှိကို ဤဓါတ်ခွဲခန်းမှ ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များမှ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ် ပြုနည်းစနစ်များဖြစ်သောBGYF Method , Mini Column test, Romer Method with TLC , ELISA Method, Kamimura Method များဖြင့် စမ်းသပ်စစ်ဆေး၍ တိကျမှန်ကန်သောအဖြေများ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ထုတ် ပေးလျက်ရှိပါသည်။
နှမ်းကိုအိတ်အခြေအနေလေးမျိုးတွင် သိုလှောင်ပြီး နှမ်း၏အဆီအက်ဆစ်လွတ် (Free Fatty Acid) မြင့်တက်လာမှုကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ